Andriamasinavalona (foko) - Wikipedia
Ny Andriamasinavalona tany am-piandohany dia ireo taranaka rehetra avy amin’ ny zanak’ Andriamasinavalona, mpanjaka, izay nanoa, sy ny zanak’ anabaviny sy ny zana-drahalahiny nahazo menakely, nipetraka am-bodivona teto Imerina. Ny Andriamasinavalona ireo taranaky ny mpanjaka Andrianjaka indrindra izay tsy voasokajy ho Zanakandriana na Zazamarolahy, isan' izany ny Zanadranavalona ao Anosimanjaka. Maro koa ny Zanakandriana sy Zazamarolahy no natao ho Andriamasinavalona. Ary misy koa ny "Zanadralambo amin' Andrianjaka" toy ny avy amin' ny terak' Antsomangy no natao ho Andriamasinavalona. Maro koa ny foko hafa no natao ho isan' ny Andriamasinavalona toa ny terak' Andriamborona sy Ampanarifito izay Andrian' Imamo ary ny taranak' izy Antemoro-Anakara telo lahy izay nanolotsaina ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Misy amin' ireny tsy taranaky ny mpanjaka Andrianjaka ireny izay nakarina ho Andriamasinavalona anefa no tsy mahazo "trano manara" eo amin' ny fasany.
Ny vohitra fiavian’ ny Zanak’ Andriamasinavalona eto Imerina dia fantatra mandrakariva fa, ankoatry ny hadivory izay iraisan’ ny vohitra tranainy rehetra, dia misy fasana mitomandavana (toy ny fitomiandalana) eo am-povoan-tanàna izay an’ ny terak’ Andriamasinavalona manokana, misy tranomanara sy kianja miaraka amin’ ny vatomasina, misy amontana sy aviavy maniry.
Taty aoriana anefa Andrianampoinimerina sy ireo mpanjaka nandimby azy dia nametraka ho sokajin’ ny “Andriamasinavalona”, ireo taranaky ny mpanjaka rehetra izay nanoa azy sy ireo olona nahavita be tamin’ ny fanjakana, na dia tsy avy eto Imerina aza, mba ho mariky ny valisoa fara-tampony mendrika azy ireo.
Koa nanomboka tamin’ ny taonjato faha-19 dia nisokajy telo lehibe ny foko atao hoe “Andriamasinavalona”:
ny taranaky ny mpanjaka sy andriana ambony izay tsy avy eto Ankibonimerina, nefa nanoa sy nanaiky ny Andriamanjaka teto Antananarivo ka natao isan’ ny Andriamasinavalona;
Ny Zanak’ Andriamasinavalona dia tsy mihinan-kena ratsy; ny sokajy faha-2 indray anefa, satria avy ivelan’ Imerina izy ireo, dia mety tsy mifady izany fa nanaraka ny fomba fanaony teo an-toerana ihany; ny sokajy faha-3, satria olon-kafa, vazaha, na silamo, dia tsy mahalala ny fisian’ izany fomba izany akory.
Izy ireto dia niavaka tokoa satria nanana zo sy sata manokana nihoatra ny an’ ireo andriana hafa satria saika nahazo vodivona sy menakely izy ireo ary nahatandrina ny fomba amam-panao nentin-drazana nampiavaka azy.
1 Ny Andriamasinavalona
1.1 Ny taranak' Andriamasinavalona
1.1.1 Avy amin’ ireo zanak' Andriamasinavalona
1.1.2 Ny taranaka sy ny zanak' anabavy sy zana-drahalahin' Andriamasinavalona
1.2 Ny taranaky ny mpanjaka ka nanoa
1.2.1 Ny taranaky ny mpanjaka ka nanoa teto Imerina
1.2.2 Ny taranaky ny mpanjaka tsy avy eto Ankibonimerina, saingy nanoa
1.3 Ireo natao sy nasondrotra ho Andriamasinavalona
2 Ny zo sy satan' ny Andriamasinavalona
3 Ireo foko Andriamasinavalona isan-tokony sy ny toerana misy azy ireo
3.1 Ny zanak' Andriamasinavalona
3.2 Ny Andriamasinavalona, zanak’ Andrianentoarivo
3.3 Ny Andriamasinavalona amin' ny Vakinankaratra
4 Ny Andriamasinavalona taorian' ny faha mpanjaka
5 Ny vohitry ny Andriamasinavalona eto Imerina
5.2.3 Ambohitrano Andrefana
5.2.4 Ambohitrano Atsinanana
5.3.1 Ambohimahatakatra - Mantasoa
Ny taranak' Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
Avy amin’ ireo zanak' Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
Ranavalontsimitoviaminandriana ao Anosimanjaka, zana-dRatianimanjaka;
a) Ny tera-dRenilambo, Ambohidrapeto no vohitra nomen’Andriamasinavalona ho vodivona ipetrahan’ireo zanany tsy nanjaka, dia Andriamborosy sy Rafaralahimanjaka, tera-dRenilambo vadiny. Izy ireo sy ny taranany no andriamasinavalona tompomenakely teo voalohany;
Tany amin’ny taona 1808 tany ho any dia napetrak’Andrianampoinimerina teo Ambohidrapeto koa Ratavy zanany tamin-dRamanantenasoa; nonina tao amin’ny lapa “ Imarivolanitra ” izy sy ny zanany Ramiza, nisaotra omby tamin’ny andro fandroana. Ary nozarain’Andrianampoinimerina Ambohidrapeto ka ny 1/3 ho an’ny zanakandriana sy zazamarolahy taranaky Ratavy ( Merimandroso, Vonelina , Marobiby, Ambohijafy ). Ny andriamasinavalona tera-dRenilambo kosa nanana ny 2/3 dia Ambohimidasy, Andohalafy, Andramahavola. Renilambo sy ny zanany. Ratavy sy Ramiza dia samy milevina ao Ambhidrapeto. Misy lafin-kavan-dRanavalona III koa ao ka izany no nandevenana ny printsy Ratsimamanga anadahin-dreniny eny;
b) Andriankotofananina dia nomen-drainy an’ Anosipatrana. Ireo zanak’ Andriankotofananina no andriamasinavalona voalohany tompomenakely tao Anosipatrana sy Ilanivato dia: Andriantsikoto, rain’ Andriandambotsimanahy sy Andriamambafotsy ary Ratsirangaina. Taty aoriana dia napetrak’ Andrianampoinimerina teo koa Rasendrasoa vadiny sy ireo iray tampo aminy ka nozaraina indray Anosipatrana: ny zanakandriana sy ny zazamarolahy nanana ny 1/3 ary ny andriamasinavalona ny 2/3. Ireo andriamasinavalona zanak ’Andriakotofananina no milevina eo an-tampon’Anosipatrana sy Ilanivato. Rabobalahy zana-dRasalimo koa dia nanana fonenana teo Anosipatrana .
Nanitatra ny menakeliny tany Anosibe - Amoronkay koa Andriankotofananina tamin’ny alàlan’ny fanambadiana, ka ny zanany nandova azy tany dia ry Andriatsimanazy, Andriantomponiloharano, Andriantsiherifahasina, Andriamanohatany mirahalahy avy, izay niavian’ny andriamasinavalona avy ao Anosibe – Amoronkay, Soamonina, Ambatomanjaka, Ambohitraina, Fihasinana. Ny taranany dia nifandray sy nifanerasera tamin’ ireo Andriamasinavalona avy ao Ambohitrandriamanitra sy Imerinarivo. Rabodonandrasana, zafiafin’ Andriakotofananina, vadin’ Andrianatody tao Imerinarivo, no reny niteraka an’ Andriatsimianatra, rain-dRazafindrahety na Ranavalona III mirahavavy;
d) Ramatoanimerina na Rafotsiramifidilahy no vavimatoan’Andriamasinavalona sy Ramananandrianjaka vadiny, ary iray tampo amin’ Andriantomponimerina, ilay mpanjaka voalohany tao Ambohidratrimo sy rahavavin-dRanavalontsimitoviaminandriana tao Anosimanjaka. Nonina tao Ambohijanakandriana - Mamiomby (atsinanan’ Andringitra) izy ary niteraka an’ Andrianavalonandrianjaka sy Rakaloy ary Ravololona;
Naka menakely tao Imahatsinjo (andrefan’ Ambatofisaorana ) Andrianavalonandrianjaka ary nanorina vohitra vaovao nataony hoe Imiantsoarivo, izay novain’Andrianampoinimerina anarana hoe Ambatofisaorana taty aoriana. Nanambady tamin’ny taranak’Andrianavalonimerina ilay noroahina hiala an’Ambohitrabiby izy ka niteraka telo mianadahy dia Andriamiaramanjaka, Razakatsivolanina ary Renibodonimerina;
Andriamiaramanjaka nanjaka tao Ikaloy, nandova ny anabavin-drainy Rakaloy, dia nanambady an-dRanavalonandriambelomasina zanaka vavimatoan’ Andriambelomasina, mpanjaka tao Ambohimanga, ary niteraka an-dRamboasalama ( Andrianampoinimerina ) sy Ralesoka. Rahefa maty izy dia nalevina ao Ambohijanakandriana - Mamiomby fiaviany.
e) Razakatsivolanina indray dia nipetraka sy nanjaka tao Imiantsoarivo na Ambatofisaorana ary milevina ao ihany; nifangaro tamin’ny zanak’ Andrianavalonimerina ilay naongana avy ao Ambohitrabiby ny taranany ka izy no isan’ny niavian’ireo andriamasinavalona marobe amin’iny faritry Mandiavato iny;
f) Renibodonimerina kosa dia efa niteraka an’ Andriamaheritsialaintany (tao Amboatany) sy Andrianamboamanjaka (tao Imerimandroso) ary Rabodonimerina, vadiben’ Andrianampoinimerina, izay izy vao nanambady an’ Andriambelomasina ka niteraka farany an-dRafaravavinandriambelomasina;
g) Andriamaheritsialaintany moa dia olo-kendry sy mpitari-tafika mahay ka nomenan’ Andrianampoina zaodahiny menakely maro be ho valisoa izay nozarainy tamin’ ireo zanany: Rambolamanana nahazo an’ Antanamalaza, Rakaloanosy tao Ambalanirana ary Ramanitrahasina tao Fiakarana-Ivato;
i) Ranavalontsimitoviaminandriana, zanak’ Andriamasinavalona faravavy (Jereo ny tantarany amin’ ny Vohitra Anosimanjaka-Marovatana) Izy no fiavian’ ireo andriamasinavalona “Zanadranavalona”;
Ny taranaka sy ny zanak' anabavy sy zana-drahalahin' Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
Ranavalomananambonintany, anabaviny, niteraka an’ Andrianambonimena, tao Alasora, sy an-dRangorinimerina tao Androhibe - Ambodirano.
1) Andrianjakavololonandriana tao Ambohitrarivo, nampitondraina ny nentin’Avaradrano ( Ivakiniadiana ) niteraka an’i
- Andrianifoinamanjaka (tao Ambatovory, Sambaina, Lohavohitra) vadin-dRafotsiraivoramavo, (anabavin-drain’Andriamary, mpanjakan’Imamo andrefana) izay niteraka roalahy dia :
11) Andriandambozozoro (tao Sambaina) niteraka an’Andriandambonavalona sy Rabodosambaina;
- Andriandambonavalona niteraka an-dRazakatsihono, tao Sambaina, (vavy natao lahy,nitondra fanjakana ary nahazo tantara tamin’Andrianampoinimerina) sy Rasavolahy zokiny sy Rasavolahy zandriny.
Naka menakely tany Marovatana koa izy izay niavin’i Ralambozozoro (ny taranany dia mbola ao ankehitriny).
12) Andrianjakafonamanjaka, tao Ambatovory, nanambady an-dRanavalokoandriamanitra, zanakavavy aivon’Andriambelomasina, mpanjaka tao Ambohimanga izay niteraka an’Andriantsiresy sy Andrianamboatsimaharivo.
2) Andriantsimitovifonamanjaka, tao Ambohitrandriamanitra - Amoronkay, nampitondraina ny nentin’ i Vakinisisaony, niteraka an’i
- Andriamiarinarivofonamanjaka, izay niteraka an’i
211) Andriantomponamoronkay (Ambohitrandriamanitra) izay niteraka an’Andriantaratasy sy Andriantsimitovy, raiben-dRazafinandriana vadin-dRamahatra,
- Andrianatody (vadin-dRabodonandrasana, zafiafin’ Andriakotofananina tao Anosibe) niteraka an’i
- Andriatsimianatra, vadin-dRaketaka avy any Angivy-Ambohipiara, ray niteraka an-dRasendranoro sy Razafindrahety - Ranavalona III, Mpanjakan’i Madagasikara farany;
- Andrianarabo, Andriantsoanandriana, sy Andriankotonavalona, izay samy lehilahy malaza tamin’ny andron’ Andrianampoinimerina, nony naka an’ Ivakinankaratra izy.
Ny taranak’ireo rahalahin’ Andriamborosinandriana kosa nijanona ho andriamasinavalona dia ny taranak’ Andriandambozafinandriana, Andriamitohinarivo, Andriamparamasina sy Andriamaria.
Ny taranaky ny mpanjaka ka nanoa[hanova | hanova ny fango]
- Andrianavalonimerina, dia ilay zanak’ Andriamasinvalona notendrena hanjaka tao Ambohirabiby, ka nilan’ Andriatsimitoviaminandriana-Ambohimanga ady, resy dia noroahiny hiala ny fanjakany sy ny vohitra nisy azy.
- Ny taranak’Andrianavalonimerina dia nataony andriamasinavalona avokoa; ireo no niavian’ ny ankamaroan’ ny andriamasinavalona amin’ Ambohimandrosohasina, Ambatofisaorana, Kaloy sy Mandiavato.
- Rafondrazaka, dia zanaka naterak’ Andriatsimitoviaminandriandrazaka, mpanjaka tao Ambohimanga. Nampanoaviana anefa izy ka Andriambelomasina, zana-dRangorinimerina anabavin’ny mpanjaka no nandimby fanjakana. Ny Zana-dRafondrazaka kosa dia ireo andriamasinavalona ao Anosy avaratra, niavian-dry Raombana sy Rahaniraka sy ny mpiray tampo aminy.
- Ny taranak’Andrianavalonjafy mpanjaka, zafikelin’ Andrianambonimena tao Alasora rahefa tsy lasa vadin’Andrianampoinimerina, dia nijanona ho zazamarolahy na andriamasinavalona avokoa;
- Ny taranak’i Ramananandrianjaka (Ravorombato), mpanjaka tao Ambohidratrimo ka ny zanany Rabehety dia noresen’ Andrianampoinimerina.
Ireo taranakin’ny mpanjaka tao Ambohidratrimo, rahefa resy Rabehety, dia niely patrana eran’i Marovatana, toy ny any Mamiomby:
- tao Andranosoalaza (zazamarolahy taranak’Andriambelanonana);
- tao Miandrarivo ny taranak’Andriantomponibemihisatra.
Nisy zafikelin’ Andriambelomasina mpanjakan’ Ambohimanga, (Razafinandri-amanitra sy Rafaralahiranginga) tonga nanambady tao Ambohipiara ka izay no antony nisian’ny Zanakandriana sy ny zazamarolahy avy ao, niavin-dRanavalona III; fa ny sisa kosa dia andriamasinavalona ihany.
Ireo taranaky ny mpanjaka rehetra resy sy nanoa an’Andrianampoinimerina avy ao Ambohitrabiby, Ambohidratrimo, Antananarivo, Alasora dia natao “andriamasinavalona” avokoa, rehefa tsy lasa "Zazamarolahy” noho ny fanambadiana na noho ny toerana notanany.
Ireo mpanjaka sy ny taranany, tsy avy eto Ankibonimerina nefa nanaiky mora foana ny fahefan’ Andrianampoinimerina na nanampy azy koa tamin’ny famoriana fanjakana dia nomeny tombontsoa hipetraka amin’ny fanjakany taloha ihany fa toy ny Tompomenakely, ka izao ny didy napetrany : « …ary ireo andriana zanak’andriamanjaka nanaiky tany Imamo, tao Vonizongo, dia tsy azo atao Marolahy ireo, fa tsy tenan’Andriamanjaka aty (Imerina), ka mitondra Menakely, ary naman’ny andriamasinavalona ». Torak’ izany koa no nataony tamin’ireo andriana amin’ ny Vakinankaratra. Ireto ireo Andriana nanjaka tsy avy eto Ankibonimerina nanaiky mora foana:
- Andriamarimampihovohovo, tao Ambohitrondrana, Imamo andrefana: izy sy ny taranany dia natao zazamarolahy, nefa marolahy tsy tenan’ny andriana avy ety Imerina ka natao hoe: “ Marolahin’ Andriamary “;
- Zanak’Andrianentoarivo 10 toko, avy any Vonizongo;
- Andrianjomoina, avy any amin’ ny ala atsinanana (Bezanozano);
- Andriamaroanaka, Ambohitrandraina-Vakinankaratra, Andriamasindraibe, Antsirabe, Vakinakaratra;
- Rajoakarivony zanak’ Andriamanalina III, tao Fanjakana, Isandra; (tantaran’ ilay antsikely hoe “Mitambolanela”);
- Andriambavizanaka, Alananindro, Ilalangina; (nahazo tantara tamin’izy niakatra naneky an’Andrianampoinimerina, ka nanaovany orimbato-hady atao hoe “Ankadilalangina ao Ambohimanga).
Noho izy ireo tsy avy eto Ankibonimerina ary ny sasany aza dia tsy taranaka avy amin-dRangita sy Rafohy akory, dia maro tamin’ izy ireo no tsy nanaraka na nanaja intsony ireo fomban-drazana nentin’ ny zanak’ Andriamasinavalona, fa nanaraka sy nanohy hatrany ny fomban-drazana fanaony teo an-toerana na teo amin’ ny fanjakany.
Andrianampoinimerina, Radama I, Ranavalona I sy ireo mpanjaka nadimby azy ireo dia nanondrotra ho isan’ ny Andriamasinavalona, ireo sokajin’ olona sasany nahavita be tamin’ny fanjakana, mba ho valim-pankasitrahana fara-tampony na dia tsy andriana avy eto Imerina aza, toy an-dry :
- Ratsilikaina sy Andriamahazonoro, Anakara-Antemoro avy any Ivatomasina–Vohipeno
- Andriantsitaitra, andriana sakalava nonina tao Tangaina ;
- ny vazaha maro samihafa: Jean Laborde, de Lastelle, Nicol,…;
- ny Kiriolona (créoles), ny Silamo-Arabo, mpivarotra, na mpandraharaha ho an’ ny fanjakana ka ny notendrena ho andriambaventy tany anindrana dia natao isan’ny andriamasinavalona.
Noho izany, ity sokajy faha-3 ity dia tsy sokajy ara-pirazanana, fa azo heverina toy ny antoko fanomezana voninahitra ihany, laharana mitovy amin’ ny Andriamasinavalona.
Toy ny sokajin’ andriana rehetra sy amin’ ny maha - havan’ andriamanjaka azy dia nanana zo efa fananan’ ny andriana rehetra ny Andriamasinavalona:
Ny nampiavaka azy kosa, dia ny fananany fahefana teo amin’ ny “menakeliny“. Ny menakely moa araka ny fanazavana tery aloha dia fanjakana kely somary nahaleotena ihany tao anatin’ny “menabe” fanjakana fehezin’ ny andriamanjaka mivantana. Ka ny Andriamasinavalona, amin’ ny ankapobeny, no nanana menakely ary natao hoe Tompomenakely.
Ny vahoaka amin’ ny menakely no nanao ny fanompoana ho an’ny tompomenakely: ny tao-zavatra an-tsaha, niasa tanimbary sy manetsa; koa rahefa miasa ny olona dia omena sakafo, vary, amonoana omby……
Ny tompomenakely no mandray ny hetra rehetra ao amin’ ny menakeliny:
ny vodihena, ny tongoamihonkona: isasahany amin’ ny mpanjaka;
ny hetra isan-tsokajiny: ny isam-pangady, ny hajia, ny harenan’ ny maty momba na maty meloka, ny harompotsy ….Fa ny variraiventy isan’ olo-miaina amin’ ny fandroana kosa dia tsy ananany zo fa hasin’ny Andriamanjaka;
Natao mpanozon-doha amin’ ny fampinomana amin’ ny tangena;
Mahavita ny fananganan-jaza sy ny fanarin-jaza ary ny fitsarana ny ady eo amin’ ny menakeliny (afa tsy ny heloka 12 mahafaty, izay fahefan’ny Andriamanjaka irery ihany);
Izay fahefana nananany izay no nilazana azy hoe “Ketsa mahafehy tena” ka nomarihina tamin’ ireto zo ireto;
Manana trano manara eo ambon’ ny fasana ho mariky ny fiandrianana;
Tsy avadika ny Andriamasinavalona (famadihan-drazana), satria efa fomba nolovaina tamin’ireo andriamanjaka razambeny; ny hafa sy ny bemihisatra no manao izany raha tiany;
Tsy homan-kena ratsy na hena lofo na hena poraka amin’ ny fahafatesana na famadihan’ olon-kafa; ny hasina sy ny fiandrianana dia tokony tsy ho lotoina amin’ny fikasihana izany;
Taty aoriana anefa, indrindra rahefa nihanaka ny fivavahana kristianina sy nihatra ny lalàna nataon’ ny mpanjanatany nandrava ny fiandrianana dia maro tamin’ ireo fomba ireo no tsy najaina sy tsy narahin’ny taranaka sasany ary very manontolo ireo zo nananany.
Tamin’ny andron’ Andriamasinavalona mpanjaka dia mbola vitsy ihany ireo taranany no nipetraka am-bodivona. Nitombo isa anefa ireo Andriamasinavalona teto Imerina, 100 taona taty aoriana fony Andrianampoinimerina nanjaka satria ireo tompomenakely rehetra, mpanjaka madinika, nanaiky sy nanoa azy dia nataony avokoa ao amin’ ny sokajin’ ny “Andriamasinavalona” nanerana an’ Imerina 6-toko.
Nizarazara isam-pianakaviana sy fonenana na vodivona araka ny fiaviany avy izy ireo, ary ny ankapobeny dia naka ny anaran’ ny razambe loharano niaviany mba iavahany amin’ ny havany hafa: efa nisy hatrany amin’ ny 50 tany ho any ny isam-pianakaviana sy isan-toko nitondra ny anarana hoe “ny zanak’ Andriamasinavalona” tamin’ io taona io. Nisy ny naharitra ela hatramin’ izao fotoana izao ireny fikambanam-pianakaviana ireny, toy ny “Zanadranavalona ao Anosimanjaka”, ny “Fikambanan’ ny tera-dRalanimboahangy - Andriantsolo ao Andramasina", ny “Fikambanana Andriana ao Antsahadinta”, sns.
Tamin’ ny taona 1840 izany hoe 30 taona taorian’ ny niambohon’ Andrianampoinimerina, dia nanao fiantsoana ho miaramila nanerana an’ Imerina 6-toko Ranavalona I ka anisan’ ny voaantso tamin’ izany ireo “zanak’ Andriamasinavalona”, ny “Zazamarolahy” ary “izy mirahalahy avy - zanakandriana”. Nitarika ny fanisana tamin’ izany Rahaniraka 10 Voninahitra, Officier de Palais. Toy izao no isan’ ireo andriandahy nantsoina:
tamin’ “izy mirahalahy avy”: 6 lahy (Avaradrano: 2; Marovatana: 2; Sisaony: 1; Ambodirano: 1);
tamin’ ny “zazamarolahy”: 72 lahy (avaradrano: 36; Marovatana: 9; Sisaony: 4; Ambodirano: 23 );
tamin’ ny “Andriamasinavalona”: 1816 lahy amin’ny Imerina enin-oko.
Ny antsasany tamin’ ireo ihany anefa no natao miaramila dia ireo salama tsara, manan-karena: manana andevo, omby vary; ny sisa tsy lany miaramila kosa dia ireo tsy salama na ireo tsy manana harena firy na andevo na omby ka natao “ borizano ”, miandry tanàna .
Dia toy izao, araka io fanisana io, ny isan’ny vatan-dehilahy Andriamasinavalona voaantso hanao miaramila isam-poko, isam-bohitra ary isan-toko.
Ny zanak' Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
- Zanak’ Andrianifonamanjaka (Ambatovory);
- Zanak’ Andrianavalonimerina (Ambatofisaorana, Ambohimandrosohasina, Andranovelona);
- Zanak’ Andriatompondraondriana (Amboniriana).
Ao amin’ ny Vakinisisaony, nisy 312 lahy:
- Zanak’ Andriantsitakatrandriana sy Andriandambozafinimerina (Soavina, Beravina, Anosinandriana, Tanjombato,Ampanga …).
- Zanak’ Andriakotofananina (Ambohitraina, Soamonina, Anosibe, Fihasinana, Ambatomanjaka..);
- Zanak’ Andrianifonamanjaka (Ambohitrandriamanitra, Andranomalaza,);
- Zanak’ Andrianatsantsa (Merinarivo, Ambohidrano, Mangarano, Mahatsara);
- Zanak’ Andriamparantsabe (Mantasoa);
-Terak’ Andriamanitrandriana (Miadamanjaka, Lazaina, Ankadivory, Ambohitrinifolo …) Ampahadimy: 86 lahy;
- Zana-dRalanimboahangy, Zanak’ Andrianonive, sy Rafanompoanandriana sy Andriampanazavan' Imerina, sy Rafanomponjozoro (Antsobolo, Andramasina, Soavinarivo, Manjaka, Iharanandriana, Rakalavao, Ambohibemanjaka, Ambohitromby, Ambohitraina, …).
Ao amin’ ny Marovatana, nisy 197 lahy:
- Zanak’ Andriatomponibemihisatra (Miandrarivo ,Beravina);
- Zanak’ Andriatsieranolona (Masinandriana, Andranomanjaka);
- Zanak’ Andriandambozozoro (Andambozozoro, Mieridaza, Besaiky..);
- Zanak’ Andriamanitra Ampanjakana (Ambohidrano, Maridaza, Ambohitraina,Tsarahasina);
- Zanak’ Andriamanjakatokana (Tsarazaza, Ambohinaorina, Marianina, Tsimatahodaza, Ambohitrinilahy, Manankasina, Anosivato, Meritsiafindra, Manjaka, ..);
- Zanak' Andriamahamaninarivo: 23 (Sakafolahy);
Ny Andriamasinavalona amin' ny Vakinankaratra[hanova | hanova ny fango]
- Ny amin’ ny Menabe: 45 (Ambohimasina, Ambohipolo, Soavina, Ambohitsimanova, ..);
- Ny amin’ ny Loharano: 25 (Ambohiponana, Ivohimalaza, Inano, Ambohimitsinjo, ..);
- Ny amin’ ny Manandriana: 74 (Ambohimahazo, Manandriana, Ambohinamboarina, Tsarafidy, ..);
- Ny amin’ny Fisakana: 21 (Ambohimanarivo, Mady ...);
- Ny Iarivo:44 (Betafo, Masinandraina, Soavina, …).
170 taona lasa izay no natao io fanisana io (tamin’ ny taona 1840). Io fanisana io no nanome ny isan’ ny vatan-dehilahy Andriamasinavalona, tokony handeha hanao miaramila, izany hoe iray na roa isam-pianakaviana; maro be koa angamba no nandositra sy niafina ka tsy fantatra. Raha atao ara-keviny, ny isan’ ny Andriamasinavalona rehetra (antitra, tanora, vehivavy, ankizy) dia tokony ho 4 na 5 heny mihoatra noho io isa io, izany hoe 8 000 olona any ho any, tamin’ izany fotoana izany. Voalaza an-tsipirihiny ny anaran’ izay nantsoina ka tonga, ny anaran’ ny rainy, ny fonenany, ny fananany. Ny sasany tamin’ izy ireo dia nanana menakely; ny ankamaroany kosa efa nanomboka sahirana ara-pivelomana; fantatra izany tamin’ ny filazam-pananana nataon’ ny tsirairay: ny isan’ ny andevo, ny omby, ny vary. Nisy tena mpanefoefo satria nanana andevo am-polony maro, omby aman-jatony, vary am-bata famarana maro. Nisy koa anefa no nilaza fa tsy nanana na inona na inona, dia nolazaina fa “mpirenireny”, tsy lany miaramila .
Ho an’ ny fanjakana anefa dia natao kitro ifaharan’ ny fahefan’ ny andriamanjaka izy ireo, satria afaka nifehy ny vahoaka menakely teo aminy, ary raha nitambatra dia lasa hery lehibe tsy hay tohaina.
Ny Andriamasinavalona taorian' ny faha mpanjaka[hanova | hanova ny fango]
Rehefa resy ny fanjakana merina taty aoriana ka lasa zanatany frantsay i Madagasikara, dia hitan’ i Gallieni, governora jeneraly, fa ireto foko Andriamasinavalona ireto izay miparitaka eran’ ny tany sady nanana zo betsaka teo am-pelatanany ary fahefana amin’ ny vahoaka, dia mety hanelingelina azy amin’ ny tetika fanjanahana tiany ampiarina ; ka nataony fahavalo tsy maintsy resena noho izany ny Andriamasinavalona rehetra .
Koa taorian’ ny nandefasana an-tsesitany an-dRanavalona III (27 Fevrie 1897), ny isan’ ny didy noraisin’ i Gallieni voalohany dia ny nanafoanana ny rafitra “vodivona sy menakely ary tompomenakely” araka ny didy arrêté laharana faha-605 tamin' ny 7 avrily 1897. Foana hatreo ireo zo maro nananan’ ny Andriamasinavalona ka ny fitenenana fotsiny ho Andriamasinavalona aza dia toy ny fandikan-dalàna mihitsy.
Ary ny nampalahelo dia maro tamin’ ireo mpiray tanindrazana tsy Andriamasinavalona no faly sy nandihy helika amin’ izao fahavoazany izao. Hatramin’ izao dia mbola tsy nahitana firy mpanoratra vahiny ka mba nilaza zavatra tsara momban’ ny Andriamasinavalona ary nisy aza sahy nanome anarana azy ireo hoe "les barons brigands".
Ny mpanoratra teratany sasany indray, nentim-pialonana angamba noho ireo zo nihoa-pampana nananan’ ny Andriamasinavalona, na noho ny fieboebona nasehon’ izy ireto indraindray, satria betsaka tokoa no nanao izany, dia tsy mba nilaza zavatra tsara loatra momba azy ireo.
Noho io lalàna navoakan’ i Galliéni io dia maro be ireo Andriamasinavalona no very harena tampoka, satria nogiazan’ ny fanjakana mpanjanatany ny ankamaroan’ ny fananany ka nozaraina na namidy mora tamin’ ireo Vazaha na Malagasy mpanampy na naman’ izy ireo; nirotsaka rahateo koa etsy andaniny ny lalàna mandrara ny fanandevozana.
Vokatr’ izany dia betsaka tamin’ izy ireo no nandeha nitady fivelomana ivelan’ ny faritra nisy azy toy ny vahoaka rehetra, nikarama tamin’ ny toeram-piharin’ ny Vazaha sasany, nitady ravinahitra hatrany anindratany. Nisy tamin’ izy ireny no very fananana tanteraka sy very anaran-dray teo amin’ ny tany niaviany, satria nony mba niverina an-tanindrazana taty aoriana dia namantana fananana efa lasan’ olon-kafa, ny fasana sisa no iraisana amin’ ny havana. Ny ankamaroany kosa anefa dia nijanona teo amin’ ny vohitra niaviany ihany, niara-nihafy sy nifampizara izay kely sisa tsy voaroba tamin’ ireo vahoaka menakelin-drazana fahiny .
Tsy nionona tamin’ izany toerana nametrahan’ ny mpanjanatany azy izany anefa ny sasany tamin’ ireo Andriamasinavalona fa nihezaka tsy ho resy teo amin’ ny fiainana ka nitondra avo hatrany ny hasin’ ny firazanany sy ny toe-tsaina maha-andriana azy ireo ka nanampy araka izay azony natao ireo mpiara-belona manodidina azy. Betsaka ireo Andriamasinavalona no nandranto fianarana sy fahalalana na teto an-toerana na tany am-pitan-dranomasina ka tonga olomangam-pirenena tsy manam-paharoa; teo ireo nitarika ny tolon’ ny fahafahana handravana ny fanjanahantany hatrany am-boalohany ka hatramin’ ny farany; teo ireo sangan’ ny firenena tamin’ ny lafiny fahaizana sy fahalalana ka nanan-daza naneran-tany; betsaka no nitana andraikitra lehibe teo amin’ ny fitondram-panjakana nandritry ny fanjanahantany sy ny fanjakana malagasy nahaleotena indray; tsy tambo isaina ireo nitari-draharaha na teo amin’ ny lafiny fiarahamonina, na teo amin’ ny lafiny ara-pivavahana sy fanabeazana, indrindra teo amin’ ny faritra sy vohitra nisy azy.
Teo amin’ ny tantara dia maro be tokoa ireo vohitra nalaza nonenan’ ny foko Andriamasinavalona, isan-tokon’ Imerina. Toa very tadidy ny sasany amin’ izy ireo ankehitriny, satria maro no efa nilaozan’ ny mponina sy ny taranaka satria tsy nifanaraka intsony amin’ ny fomba fiainana ankehitriny (an-tendrombohitra avo sarotra hidirana, saro-drano, feno fasana, …), toeram-pitsangatsanganana sisa no azo atao aminy. Betsaka koa nefa no mbola onenana ary very ao anatin’ ny vahoaka, simba na very aza ny vakoka tranainy maha-vohitr’ andriamasinavalona azy, ka tantara manjavozavo sisa fantatra momba azy.
Anosipatrana–Ilanivato[hanova | hanova ny fango]
Marobe ny vohitra ao amin’ ny faritry “Voromahery”, izany hoe ireo vohitra manodidina mivantana amin’ Antananarivo sy ny ao Antananarivo fa iray ihany aloha no horesahina dia Anosipatran-Ilanivato. Isan’ ny vohitra nalaza Anosipatrana hatramin’ ny andron’ Andriamasinavalona satria napetrany hanana vodivona sy menakely teo ilay zanany lahy atao hoe Andriankotofananina, izay razana niavin’ ireo andriamasinavalona ao Anosipatrana sy Ilanivato ary Anosibe-Amoronkay. Tsy hitantara firy intsony ny momba azy eto satria efa voalaza ery aloha izany. Nametrahan’ Andrianampoinimerina honenan-dRasendrasoa vadiny sy ireo iray tampo aminy koa teo Anosipatrana ka nifampitazana sy nifampizara fananana teo ny andriamasinavalona sy ny Zanakandriana. Matetika moa ny fizarana dia mitelo: 1/3 an’ ny Zanakandriana sy Zazamarolahy ary ny 2/3 dia an’ ny Andriamasinavalona. Tato aoriana indray dia nahazo toerana honenana teo koa Rabobalahy, zana-dRasalimo vadin-dRadama I, ka mbola eo ireo taranany sasany .
Andriandambotsimanahy, zanak’ Andriankotofananina no naka vodivona voalohany teo Ilanivato, loharano niavian’ ny Andriamasinavalona teo, toa an’ Andriambola, zanany, Andrianabo, Ranaivo-Rahanetra, ry Rahasivola sy Ratarivola (nanambady an-dRazafianaka, anadahin-dRanavalona I) sns, ary ny nalaza taty aoriana ela dia izany mpitandrina atao hoe Rambelo izany.
Vohitry ny Andriamasinavalona efa hatramin’ ny ela Ambatofisaorana, mbola onenan’ ny taranaka, nefa vitsy mpahalala ivelan’ izy ireo. Vohitra miorina ao avaratr’ Isadabe, amin’ iny làlana miala avy eo Talata-Volonondry, mianavaratra mahazo an’ Ambatomanoina mandalo an’ Ambohitrolomahitsy. Imiantsoarivo no anaran’ Ambatofisaorana taloha. Toy izao no ambaran’ ny lovantsofina ka mbola tadidy tsara.
” E! Andriamanitra Andriananahary, hipetraka amin’ ity tanàna ity aho, ka omeo fambara fa ho maro dia maro ny vahoaka honina eto ! ”
Niteraka telo mianadahy Andrianavalonandrianjaka dia: Andriamiaramanjaka, nanjaka nandova ny anabavin-drainy tao Ikaloy, ary ray niteraka an-dRamboasalama-Andrianampoinimerina sy Ralesoka anabaviny; Razakatsivolanina, tompom-bodivona tao Imiantsoarivo (Ambatofisaorana), ary milevina ao am-bohitra ao ihany, ao amin’ ilay fasana atao hoe “Andranolava”. Izy no loharano niavian’ ireo Andriamasinavalona avy ao satria niteraka dimy lahy izy dia: Andrianavalona, Andriandio, Rainandriamanitrahasina, Rainandriankotovao ary Ingezalahy.
Fony Andriamasinavalona nanjaka dia Andriampanarivofonamanjaka, zaodahiny, vadin-dRanavalontsimitoviaminandriana no tompomenakely lehibe tamin’iny faritra atsinanana manamorina ny ala iny hatrany avaratr’ Ambatovory (toko Avaradrano) ka hatrany atsimon’ Ambohitrandriamanitra (Vakinisisaony). Maro anaka izy ka ny roa lahy nandova fanjakana dia Andrianjakavololonandriana (tao Avaradrano) sy Andriatsimitovifonamanjaka (tao amin’ ny Vakinisisaony).
Andrianjakavololonandriana dia nonina tao Ambohitrarivo, nanjaka tamin’ny ilany atsimo amin’ ny toko Avaradrano (Ivakiniadiana ankehitriny) ary niteraka an’ Andrianifonamanjaka; ity indray nanambady an-dRafotsiraivoramavo, zanak’ anabavin-drain’ Andriamarimapivovo, mpanjaka tany Imamo andrefana. Niteraka roa lahy izy roa dia: Andriandambozozoro sy Andrianjakafonamanjaka.
Andrianjakafonamanjaka dia napetran-drainy tao Ambatovory; nanambady an-dRanavalokoandriamanitra izy, izay zanaka vavin’ Andriambelomasina, mpanjakan’ Ambohimanga. Lasa vinanton’ ny Andriamanjaka noho izany Andrianjakafonamanjaka ary ny zanany sy ny taranany dia natao isan’ ny Zazamarolahy: Andrianamboatsimaharivo sy Andriantsiresy izay nanambady an-dRabodosambaina, zanak’ Andriandambozozoro, avy ao Sambaina.
Andriandambozozoro indray dia nanjaka tao Sambaina; niteraka maromaro izy fa ny voatanan’ny tantara dia izy mianadahy: Andriandambonavalona sy Rabodosambaina vadin’ Andritsiresy voalaza eo ambony. Tsy nipetraka teo Sambaina loatra Andriandambozozoro fa lasa nanorina fanjakana menakely tany Imerinatsimo - Ambodirano, tao Malaza (atsinanan’ i Fenoarivo) ka niteraka an’ Andriamifonozozoro mianadahy avy, loharano niavian’ ny Andriamasinavalona amin’ iny faritra Ambodirano iny.
Dia nifindra indray Andriandambozozoro nankany Marovatana, tao Andambozozoro, andrefan’ avaratr’ Ambohipiara, ka niteraka an-dRalambozozoro sy ny taranany izay manana lafin-kavana aty Lohavohitra - Sambaina.
Ary Andrianonihafa tsy tamana intsony tao Namehana, fa be voalavo sy bibilava tompon-drano tao ka nifindra nankeny Ambohidrano, alatsinanan’ Ambatofotsy - Zanadralambo izy ka tany izy no niteraka ny zanany atao hoe Andriantokanamantany, andriana fiavin’ ny andriamasinavalona sasany ao Ambohidrano. Misy lovantsofina milaza fa tao Mahatsinjo, avaratr’ Ambatofotsy izy no nitoetra ary ny menakeliny no tao Ambohidrano; nefa hoy Andriambelomasina:
Vohitra eo avaratra andrefan’ i Fiaferana – Andrianamboninolona, Ambohidrano. Nisy maromaro ireo zafikely sy zafiafin’Andriamasinavalona no nomeny vodivona tany amin’iny faritra iny dia Andriantompombe tao Ambihidalôna, Rampianala tao Ambatomalaza, Ramarohasina tao Ambohitrakely, ary Ramambahasina nifidy an’Ambohidrano. Taranaka avy amin-dRamambahasina ilay andriandahy nalaza tao natao hoe Andriamasina. Ny raharaha isan’ny nampalaza ny andriamasinavalona avy ao Ambohidrano atsinanana dia ny mitsara « manozon-doha amin’ny fampinomana tangena ».
Ny loharano ao Ambohidrano no fisotron’ny Andriamanjaka aty Antananrivo, nohon’ny hatsarany fa madio, mamy, mangatsiatsiaka. Misy zohy eo ambany atsimon’ny vohitra, fieren’ny kristianina tamin’ny « Tany maizina ».
Maro be ny vohitra malaza nonenan’ny zanak’Andriamasinavalona tao Vakinisisaony satria ankoatra ireo vodivona nisy ny taranaky Ranavalontsimitoviaminandriana anabaviny, vadin’Andriampanarivofonamanjaka, ( amin’ny Vakinampasina: Ambohitrandriamantra, Merinarivo, Miadamanjaka, Lazaina,Mantasoa…), dia tao koa:
- ny zanak’Andrianavalonarivo sy Andriandahimbolamena (amin’ i Alasora: Ambohijanaka, Ambalanirana, Ambohitrandriananahary…,);
- ny Tera-dRalanimboahangy, vadiny (amin’ Ampahadimy: Andramasina, Ambohi-tromby, Ambohitraina).
Ka ho tsongaintsika amin’ireo Ambohimahatakatra.
Ambohimahatakatra - Mantasoa[hanova | hanova ny fango]
Ambohimahatakatra, vohitra tranainy, eo atsimon’ny tanànan’i Mantasoa, fa ny renirano Varahina no mampisaraka azy. Vohitra mbola rakotra ala tranainy sy anirian’ny ahitra sy zava-maniry maintso lava milenodenoka, toerana tokony atao fitsangatsanganana sy fakan-drivotra.
Vohitra nanana ny lazany hatry ny ela, fony Andriamasinavalona nanjaka, saingy saika haolo fa nosongonan’i Tsimanampiovana–Mantasoa eo akaikiny; ny fasana tranainy sy ny trano vitsivitsin’ny taranaka sendra mandalo sisa mijoro. Ao no misy ny fasan-dRasoherina reniny, na Ramanitrandriatsimitovy renin-dRasoherimanantany, vadin’ Andriambelomasina, mpanjakan’ Ambohimanga, loharano niavian’ ireo andriamanjaka rehetra nanjaka taorian-dRadama I, fa hoy mantsy Andrianampoinimerina nampihatra ny didy nataon-draibeny:
Fa ahoana moa ny tantaran’ity vohitra ity sy ny taranaka nipoitra avy eo? Ny anarany dia mampatsiahy ilay vohitra voalohany any avaratra atao hoe Ambohitsitakatra izay naorin’ny foko merina vao tonga teto ampovoantany notarihin’Andriatsitakatra sy ny namany, raha lazaina fa avy any ampitan-dranomasina any atsinanana, avy any amin’ ny tany hoe Nusantaria (Nosy maron’ i Indônezia) no fiaviny. Taona maro taty aoriana dia nanorina indray an’Ifanongoavana ny taranak’ izy ireo izay nanjakan’ Andrianamponga.
Tany amin’ ny taona 1500 tany ho any,nanorina ny fanjakana entin’ ny andriana ramatoa Rangita, zanakavavin-dRafandramanenitra, taranak’ Andrianamponga I, ka nataony hoe Imerimanjaka ny renivohiny ary izy nantsoina hoe Andriamanjaka (andriana manjaka). Rangitamanjakatrimovavy no niavian’ny andriana merina rehetra.
Niteraka maro Rangita ka Rafohy zanany vavy no nandimby azy ary ny zanany lahy atao koa hoe Andrianamponga II, nanoa.Nalefan’izy mianaka anefa Andrianamponga honina any Ifanongoavana, vohitry ny razany fahiny. Haninona ? Nirahiny izy hampandrendrika vy sy hanao fiadiana sy fiasana amin’ny vy, fa malaza mahay manao izany ny mponina merina amin’iny faritra iny, fahaizana nolovaina tamin’ireo razambe avy any Nosantaria. Ka izany fiasana sy fiadiana vita amin’ ny vy nampanamboarin’ ny anadahin-dreniny izany no nentin’ Andriamanelo nandresy ny vazimba sy nanitarany fanjakana.
Nanjaka toy ny tompomenakely Andrianamponga II tany Ifanongoavana, ary ny fanjakany dia nolovain’ny taranany nandritry ny 200 taona ka Andriampanarivofonamanjaka no nalaza sy farany tao Ifanongoavana efa taty amin’ny taona 1700 tany ho any. Nony maty Andrianamponga dia nalevina tao Ambohimahatakatra (misy fasana fahatsiarovana azy -cénotaphe- ao Alasora).
Nony nanjaka Andriamasinavalona, nahare ny lazany sy ny hatsaram-panahiny Andriampanarivofonamanjaka, ka tonga nanoa amin’ny nahim-pony sy nanolotra azy ny fanjakany tany Amoronkay. Faly Andriamasinavalona fa nihitatra ny fanjakany, ka ho marik’izany dia navelany hanjaka teo amin’ny menakeliny ihany Andriampanarivo, nirahany hampandry tany koa ary nomeny an-dRanavalotsimitoviaminandriana anabaviny ho vadiny ka ny zanak’izy ireo dia handova ny fanjakany. Niteraka maro izy mivady ka ny roa lahy dia nanjaka :
-Andrianjakavololonandriana tao Ambohitrarivo, nitondra ny fanjakany avaratry ny renirano Varahina, amin’Avaradrano (izany hoe Ivakiniadina-ankehitriny);
-Andriantsimitovifonamanjaka kosa tao Ambohitrandriamanitra– Amoronkay, ilany atsimon’ny renirano Varahina; Rehefa voazara roa toy izany ny fanjakany dia napetrany teo amin’ny vohitra kely, amoron’ny rano Varahina Ranavalontsimitoviaminandriana vadiny, hanaramaso an’ izy roalahy zanany, fa sady mahatakatra ny any avaratra misy an’ Andrianjakavololonandriana no mahatakatra manara-maso ny atsimo, misy Andriatsimitovifonamanjaka. Ka izany hono no nahazoan’ ilay vohitra anarana hoe “Ambohimahatakatra". Io toerana io,ampitan-drano atsimon’ny tananan’ i Mantasoa dia fivezivezen’ ny olona mianatsimo na mianavaratra, ka be androvolahy maditra mpanao barofo sy mpanao fe hariva mety hanakorontam-panjakana ka nilana andriana nifehy sy niandry, ka ny vadin’ Andriampanarivofonamanjaka mihitsy no napetrany teo ary mba hotsidihiny matetika koa.
Amin’ ny lovantsofina dia misy Ranavalontsimitoviaminandriana roa, ny voalohany, ilay anabavin’ Andriamasinavalona vadin’ Andriampanarivofonamanjaka, taty Amoronkay-Vakinisisaony izay tantaraina eto, ary ny faharoa ilay zanaka faravavin’Andriamasinavalona, nipetraka tao Anosimanjaka-Marovatana, izay samy voalaza fa reniben’izy telo mirahavavy vadin’ ny mpanjaka telolahy: Ramorabe vadin’ Andriamananimerina, tao Ambohidratrimo, Rasahala vadin’ Andriampoinimerina tao Antananarivo, Rasoherina na Rasoherimanantany vadin’ Andriambelomasina tao Ambohimanga; izy ireo dia zanaka vavin-dRasoherinareniny, milevina ao Ambohimahatakatra. Samy lazaina fa loharano niavian’ ny andriamanjaka teto Imerina izy ireo. Samy mitana ny heviny koa ny mpitantara momba an’ ireo Ranavalontsimitoviaminandriana roa, reniben-dRasoherina. Ka ny an’ iza no marina ? Aoka hohajanona eto ny resaka momba izany fa tsy hisy farany, satria mety tsy ho takatry ny fahatsiarovana.
- Andrianantsantsa, tompomenakely tao Ambohitrandriamanitra ihany ary koa loharano niavian’ireo andriana tao Imerinarivo, fiavin-drain-dRanavalona III;
Raha bangoina dia taranaka avy amin’ Andriampanarivofonamanjaka sy Ranavalon-tsimitoviaminandriana, ireo andriamasinavalona avy ao Ambohimahatakatra sy ny manodidina rehetra, ary nantsoina hoe ”ny Zanak’ anabavin’ Andriamasinavalona”. Araka ny tantara dia ny andriana Razakamanana (1800?-1870?) no tompomenakely tao Ambohimahatakatra, nanorina an’ i Masombahiny. Niteraka mianadahy izy ka ny vavy atao hoe Ratompo(arisoa) dia nanambady andriamasinavalona tany Marianina, vohitra eo andrefana atsimon’Anosimanjaka ka niteraka an’ i Ralaiarivony sy Raobelina; ka ity Raobelina ity no fantatra fa nitondra farany tao Ambohimahatakatra.
Andramasina no voafidy fa misy fitoviana amin’ i Tsinjoarivo. Efa nisy vazimba nonina teo talohan’ ny nanorenan-dRalanimboahangy ny tena tanàna ary Ankadimbazimba no anarany talohan’ ny nanovana azy hoe Andramasina. Ralanimboahangy anefa toa tsy nipetraka firy teo fa teny Ambohimanjaka-Ambatobe, tendrombohitra avo ambony avaratr’ Andramasina, no nonina sy milevina, fa ny taranany no nidina teo ambany atsimo, amoron’ny rano Sisaony.
Nanana zafikely vavy atao hoe Rangory i Ralanimboahangy nandeha nanambady an’ Andrianjafindramioro, mpanjaka tao Antongona. Niteraka mianadahy izy mivady dia Andriantsolo sy Ratsiavanga. Nifanaraka izy roa talohan’ny hivadiana fa ny zaza ampy indray mihira dia ho an’ Andramasina fa tsy ho an’ Antogona. Koa nony maoty izy mianadahy dia nentina tamim-piravoravoana tany Andramasina, nilanonana sy namonoana omby teny an-dàlana, ka iray volana vao tonga tany. Niova anarana koa Rangory reniny ka natao hoe Renindrasolo.
Ity Andriantsolo ity dia tonga vadintany nalaza tamin’ ny Vakinisisaony tamin’ ny andron’ Andrianampoina, ary lehiben’ Atsimondrano. Nanana lapa roa Andriantsolo dia iray teo an-tampon’Ambohimanjaka natao hoe « Tsarasaotra » ary ny faharoa tao Andramasina nataony hoe « Mandovahasina ». Izy no nanao farihy teo amin’ ilay lohalokely ao Ambohimanjaka. Ramanjaka no zanany nandova azy, lehilahy nalaza nanome an’ i Tsinjoarivo ho toeram-pitsangatsanganan-dRanavalona I; nefa novonoin’ ity izy taty aoriana fa nampangaina ho nitady hamosavy ny Andriamanjaka :
- Mpanome amalona amin’ ny saron’ ankarona ho an-dRanavalona I Ramanjaka, nefa indray mandeha dia nosoloin’ ny iraka mpitondra fanomezana teny an-dàlana lohan-tsaka ny amalona izay no nampisafoaka ny andriambavy ka nampamonoiny Ramanjaka. Razafimandimby 14 vtra, zanaky Ramanjaka no nandimby azy, nalaza fa isan’ ny namono nanankenda ho faty an-dRadama II ho toy ny valifaty angamba.
Betsaka koa ny vohitra fonenan’ny andriamasinavalona ao Marovatana:
- Andranosoalaza, any ambodin’ Andringitra, eo am-pita avaratra atsinanan’Ampananina, misy ny taranak’ Andriambelanonana, zana-dRamorabe;
- Miandrarivo, atsimon’ i Mahitsy, misy ny taranak’Andritomponibemihisatra, zana-dRamorabe;
- Antanjondroa (misy ny zanak’ i Ramananadrianjaka sy Rabezaka), Andriantany, Manjakazafy, Ambohipiara, Andambozozoro, Fiakarana,sns ...).
Vohitra kely toy ny nosin-drano eo afovoan’ ny tanimbarin’ny Betsimitatatra, andrefan’ Ambohitrimanjaka ary atsinanan’ Ampangabe ity Anosimanjaka ity.
Ranavalontsimitoviaminandriana, zanaka faravavin' Andriamasinavalona, mpanjaka (tsy azo afangaro mihitsy amin’ ilay mitovy anarana aminy izay anabavin’ Andriamasinavalona ary milevina any Ambohitraina), no nifidy honina sy ho tompombodivona teo Aminampanga niova ho Anosimanjaka. Ny mampalaza azy dia Ranavalontsimitoviaminandriana, antsoina koa hoe Inenibe, izay heverina sy inoan’ ny ankamaroan’ny olona fa manana hasina manokana, araka ilay tantara somary mifono angano milaza ny fifindrany monina niala avy eny Alasora ka nitetezany ny rano hatreo Anosimanjaka, teny ambony ravitatamo…, sy ny fahagagana fanasitranana sy fiarovana niseho tamin’ireo mangatam-pitahiana aminy. Tsy amerina izany tantara izany eto akory na hitondra adihevitra ny amin’ izany fa ny tiana ho fantatry ny mpamaky dia i Ranavalontsimitoviaminandriana no isan’ ny loharano niavian’ireo andriamanjaka rehetra teto Imerina taorian’ izy efa-dahy nanjaka, zanak’ Andriamasinavalona.
- Ranavalontsimitovy dia zanak’Andriamasinavalona sy Ramananandrianjaka ka ny iray tampo aminy dia :
- Andriantomponimerina, mpanjaka voalohany tao Ambohidratrimo (ilay naditra ) sy
- Ramatoanimerina (na Rafotsimifidilahy ) nitoetra teny Ambohijanakandriana – Mamioby, niavian’Andriamiaramanjaka, rain’Andrianampoinimerina. Niteraka 9 mianadahy 4 vavy, 5 lahy izy. Izy 5-lahy no niavin’ ireo Andriamasinavalona ao Anosimanjaka antsoina hoe Zanadranavalona.
1- Ratomponimerimanjaka vadin’ Andriantrimobemihisatra, mpanjakan’Ambohidratrimo;
2- Ramanitrandriatsimitovy natao koa hoe Rasoherina reniny, nanambady an’ Andriambolanambo tao Namehana niteraka an' i :
3- Rapapangosasakinivorona, tao Ambohimitsimbina, niteraka an’i
- Rasahalarazaka, vadin’Andriampoinimerina, mpanjakan’Antananarivo, loharano niavin’ny andriamanjaka tao,toa an’Andrianambotsimarofy;
4- Razakanavalondralambo, loharano niavian’ ny andriamasinavalona ao Fikarana-Ivato, isan’ ny « Zanadranavalona ». Ny mampalaza koa an’ Anosimanjaka dia ny fankalazan’ ireo Zanadranavalona isan-taona ny andro fandroana amin’ ny tsinambolan’ ny Alahamady, manaraka ny fomba teo aloha, araka ny hafatra napetrak’ i Nenibe.
Antsahadinta no isan’ ny vohitra malaza ao Ambodirano izay samy misy ny Andriamasinavalona, ny Zazamarolahy ary ny taranak’ Andrianampoinimerina avy amin-dRabodozafimanjaka, isan’ ny 12 vavy vadiny. Vohitra eo atsimo andrefan’ Antananarivo, vohitra mbola mifono ala ary voakarakaran’ ireo taranaka ka lasa toeram-pitsantsangana mahafinaritra, misy tranom-bakoka.
Araka ny tantara dia Andriamangarira, zanak’ olo-mirahavavy amin’Andriambelomasina, no tompom-bodivoana, mpanjaka tompomenakely nanorina voalohany ny tanàna, nampanao ny hadivory 7 sosona mankadiry manodidina sy nandrara ny fikapana ny hazo ka nahavoatahiry ny ala manodidina ny vohitra.
« Mananjara samy vohitra Antsahadinta. Ny ora-mirotsaka itoviana ihany, fa ny patrak’ala vaventy tombondahiny ihany ! ».
"…Nantsoina hifampiraharaha amin' i Ramaromanompo tao Anosizato aho mba hanao vanja. Natao ny fifanarahana teo anatrehan’ny havan’ny mpanjaka dia: ny vadibeny Reniamboa, ny zaodahiny Andriantomponimerina (Dian –Tompou Emir) (ndrl na Rabehety ,mpanjakan’Ambohidratrimo, afaka nandositra fa tsy novonoina), ny anabaviny Ravao na Ravaonimerina (Raveaux) vadin’ Andriatomponimerina, sy Razafinamboa….".
Volana vitsivitsy tato aoriana (Aogositra 1803) maty Reniamboa, vadiben-dRamaromanompo; noararaotin’ Andrianampoinimerina izany hanafihana an’ Anosizato. Lasa nitsoaka nankeny Antsahadinta i Ramaromanompo sy ny fianakaviany fa mafy fiarovana io vohitra io sady misy ny havany maro be. Nataon’ Andrianampoinimerina fahirano Antsahadinta ka 15 andro (tapa-bolana) vao afaka. Afaka nandositra indray Rabehety sy ny havany akaiky, lasa nankany an-drefana any Imamo, fa azo sambo-belona tao kosa i Ramaromanompo sy Ravaonimerina, anabaviny, izay nalahelo mafy ny vadiny lasa nandositra; dia nalain’ Andrianampoinimerina ho vady indray i Ravao, napetrany tao Antananarivo.
Napetrany hitondra sy hiandry fanjakana tao Rabodozafimanjaka, isan’ ny 12 vavy vadiny, zanak’ Andriantsira, avy eny Alasora ka tao izy mianaka Rakarabo zanany tamin’ Andrianampoina no nijaka sy nisaotra omby amin’ny andro Fandroana. Nanomboka hatramin’ izay dia i Rabodozafimanjaka sy ny taranany no nanjaka tao Antsahadinta ary milevina ao. Fasana fotsiny sisa ho an’ Andriamangarira; ao koa ny an-dRatsimisotry zazamarolahy, ny an’ Andrianjakatrimo, Andriamasinavalona; ery andrefan’ ny tanàna no misy ny fasana nametrahana an’ Andrianamboatsimarofy, mpanjaka resy tao Antananarivo sy ny an-dRatsimihara...
Ny Andriamanjaka sy ny havany izay nanjaka tany Vakinankaratra nantsoina koa hoe fanjakan’ Andrantsay (anarana renirano) fahiny, dia andriana avy aty Imerina ihany ka izany no antony nampidiran’ Andrianampoinimerina an’ i Andrantsay ho isan’ny merina satria vahoaka merina ny ankamaroan’ ny mponina tao ankoatry ny tompontany.
Rahefa niainga izy ireo dia nentiny niaraka taminy ny filohan’ ny vahoakany sasany (hova sy menakely), ny angaralahy, ny mpanompo ka nandray ny làlana mianatsimo, nanaraka ny moron’ ala atsinanana, satria tsy nisy olona nanelingelina fa mbola efitra ny toerana . Nivezivezy ela ihany izy ireo nitady toerana honenana: tonga hatrany Kiriiroka any Fisakana, niverina nianavaratra taty amoron’ny renirano Onive, nandalo an’ i Vontovorona, ary farany tody tany amin’ ny faritry ny renirano Andrantsay sy Betafo, izay efa nisy ny Vazimba Radobay. Nalainy ho sakaiza nefa nofitahan’ Andrianony sy novonoiny ity Vazimba ka nalainy avokoa ny ody sy ny sampiny, dia azo mora foana ilay faritany ka nanjakany am-piadanana.
Afohezina ny tantara. Nony taty aoriana, efa niorina ny fanjakana dia nifampizara izy telo mianadahy:
Rehefa azo sy nanaiky Vakinankaratra, dia nampiana an’ ireo fanjakana rehetra tamin’ ny vakin’ i Mania sy Vakin’ i Matsiatra, hatrany Tsienimparihy atsimo satria ireo mpanjaka izay nanaiky ny hanoa an’ Andrianampoinimerina dia nijanona ho mpanjaka teo amin’ ny fanjakany ihany saingy nampitoviana fitondrana tahaka ny menakely Ireo nanohitra ka resy dia nalaina ny fanjakany natao “Menabe” fehezin’ Antananarivo mivantana na natambatra amin’ ny fanjakana iray ao Vakinankaratra.
- Ilalangina, fanjakan’Andriambavizanaka, nanoa ka nijanona amin’ ny fanjakany ihany;
- Itsienimparihy, fanjakan-dRarivoarindrano, nanoa ka nijanona amin’ ny fanjakany ihany. Midadasika tokoa ny faritry Vakinankaratra fa ny farany avaratra dia Rangaina - Onive (Antanifotsy) ny atsimo Tsienimparihy (Ambalavao), ny atsinanana ny ala, ny andrefana ny fanjakana sakalava Menabe. Nizara roa Vakinankaratra dia :
- Ny Andafiavaratrimatsiatra-Manandriana (hatreo Ivato no mianatsimo);
- Ambohitsimanova atsinanana: hatreo Ambohijafy miatsinanana hatrany amin’ ny Zafimaniry, hatreo Rangaina–Onive mianatsimo ka hatrany Ivato;
- Ambohitsimanova andrefana: Ambohijafy miakandrefana hatrany an-tsakalava. Betafo ihany anefa no foiben’i Vakinakaratra manontolo .
Rehefa vita Vakinakaratara manontolo dia nitodi-doha nianavaratra nody ny tafika; nony tonga teo Ambohipeno (tendrombohitra atsimo-atsinanan’ Ambatolampy ankehitriny, amoron’ i Onive) dia nitodika tamin’ireo zana-dRangorinimerina 7 lahy Andrianampoinimerina satria izy ireo no tena nifikitra sy nanao izay ahazoana an’ i Vakinakaratra tamin’ny tetika sy tamin’ny fifampiraharahana na tamin’ny ady ka nahafam-po ny Andriamanjaka ary novaliany soa. Dia nomeny azy ireo ho menakely sy ifampizaran’ izy ireo ny tany teo anelanelan’i Vakinankaratra sy Ambodirano ary Vakinisisaony, hatreo Ihazolava no mianatsimo hatrany Rangaina–Antanifotsy, ka ipetrahan’ireo taranany hatramin’izao .
Renivohitry ny toko Vakinankaratara izy. Ny anarany hono, dia avy amin’ny hoe Be-eto-afo (be setrok’ afo) satria tanàna be trano madinika midonan-tsetroka izy fehizay, fa nisy vahoaka (menakely, andevo) mpiandry ny Vohiambo (fasan’ andriana) izay ilevenan’ Andrianonitomponitany sy ny taranany; nantsoina koa hoe « Itsaravavaka » ny fasany, araka ny firarian’ Andrianampoina izay nanenina mafy tamin’ ny nampamonoana azy tsy ara-drariny ka nanao hoe: « Mba ataovy tsara vavaka re izaho sy ny taranako, ry Andrianonitomponitany ô ! Fa aza manody izany voafitaka ! ». Ambohitsimanova dia tanàna kely eo avaratry ny farihy Tatamarina. Tamin’ ny Merina “lavasofina” naka an’ i Vakinankaratra, dia tsy mba nanohitra i Betafo; ka teo amin’ io toerana io no nanao velirano ny andaniny roa: Andrianampoina nanome toky fa tsy hanova ny fitondrana ary tsy hanetry razana; teo andaniny indray Andriantsileondrafy, zanak’ Andrianonitomponitany, nisahàto fa hanoa an’ Andrianampoina ka tsy hanova izany izy sy ny taranany. Tonga toerana fisehoan’ ny andriana teo sy fivorian’ ny ambanilanitra amakiana ny kabarin’ ny mpanjaka, ary lasa toerana fanaovan-dalonana. Itatamarina dia ilay farihy ao atsimon-tanàna, laza manokan’ i Betafo. Natahorana izy tany aloha fa rehefa hisy hiamboho hono ireo andriandahy lehibe ao Betafo dia mivadika maloto toy ny misy taim-boraka ny rano ka dia Andranomilalahy no natao anarany fony izy mbola kamory kely. Andrianonitomponitany no nanamboatra azy ho tonga farihy lehibe niaraka tamin’ ireo hady fito sosona ka sady lasa fatsakana izy raha misy fahirano no manda fiarovana avy eo atsimon-tanàna.
Aiza moa no misy an’ i Vonizongo? Hatreo amin’ ny renirano Moriandro, mandalo ny tanànan’ i Mahitsy no miakandrefana – avaratra, ka hatrany Andriba no faritra misy azy.
Mitovitovy amin’ ny distrikan’ Ankazobe ankehitriny. Izany atao hoe Andriamisavalambo (I) izany no mpanjaka voalohany tany, niara-belona tamin-dRalambo sy Andrianjaka. Nalaza ho nahery nandeha izy izany, ka tanàna roa mifanalavitra dia tratrany indray andro ,samy isaorany omby amin’ ny andro Fandroana. Ratsy fitondra vahoaka anefa izy ka tonga halan’ny olona. Izy koa no voalaza fa nahita voalohany ny tangena ka nanorina ny fampinomana amin’ io poizina io ho fitsarana, ka izay resy sy maty dia nobaboina ny fananany. Noho izany rehetra izany dia nangidy hoditra tamin’ ny vahoaka Andriamisavalambo. Dia niainga Andrianentoarivo sy ny loholona 10 lahy sy vatan-dehilahy 40 sy vahoaka sasany ary Ravonizongo teo Lohavohitra mba hanafika an’ Andriamisavalambo. Resy tao Andriba Andriamisavalambo ka novonoina tao Ambohitromby. Lasan’ Andrianentoarivo ny fanjakany ary natao hoe Maromadinika ny vahoakany.
Raha nijery ny heniheny be teo andrefan’Antaninarivo Andrianjaka dia niloa-bava hoe:
Dia nihady an’ Ankadimbahoaka Andrianjaka, hadi-tany voalohany nampanaoviny ny vahoaka ho fefiloha ka izay no nanaovana azy hoe “Ankadimbahoaka”. Samy nanao avokoa ny ambaniandro sy ny havan’andriana, ary nandraharaha teo Andriantompokoindrindra sy Andrianjaka.
hoy Andrianjaka. Dia nandeha Andrianentoarivo nankany Lohavohitra. Ary taty aoriana indray dia niakatra taty Antaninarivo izy nangataka an’ i Babay, dia hoy Andrianjaka :
Dia nanao orimbato izy roa lahy teny Andringitra ho fanamafisana izany. Koa rehefa nitoetra teo Lohavohitra Andrianentoarivo dia nampanaiky an’ i Vonizongo manontolo. Niteraka roa lahy Andrianentoarivo dia Andriamosanja sy Andriampimanjaka, izay nizara ho roa an’i Vonizongo ho atsimo sy avaratra. Ny taranak’izy roa lahy ireo no tompom-bodivona sy menakely tamin’iny faritra avaratra andrefan’Imerina iny.
Ary nony tamin’ ny andron’ Andrianampoinimerina nampandry an’ i Marovatana - Ambohidratrimo, dia tonga tamin’ ny nahim-pony ny iraka avy amin’ireo terak’ Andrianentoarivo-Vonizongo nilaza tamin’ Andrianampoina nanao hoe: ”Avy manaiky ho zanakao izahay, fa mandre ny teninao hoe ampiadana ny vahoaka…!”
Dia faly ny mpanjaka ka ho valin’ ny faneken’ izy ireo dia tsy nesoriny fa napetrany tamin’ ny vodivona nisy azy ireo tsirairay avy; ary ireo zanak’Andrianentoarivo nataony ho isan’ny Andriamasinavalona, nomeny elomena isan-dahy. Nozarainy folo araka ny isany i Vonizongo ka Andriantsimidodò sy Andriantsoba no natao ho isan’ny filohany tamin’izany.
Betsaka mihitsy ireo vohitra nisy ny terak’ Andrianentoarivo, Andriamasinavalona amin’ny Vonizongo saingy tsy dia nisy nahazoana tantara firy ary efa lasa haolo aza ny sasany na niova anarana taty aoriana. Ny hany nahazoana tantara kely dia Ambohimirimo, ao amin’ny zarantanin’ i Tsaravoninahitra.
Taty aoriana dia napetrak’ Andrianampoina teny Rasoamananoro zanany, reni-dRamasy. Nony niamboho anefa Radama I tato aoriana dia natolo-dRanavalona I ho an-dRamboasalama zana-drahavaviny Ambohimirimo, ka izy no andriana tompombodivona tao hatramin’ny nahafatesany. Andriantasy mianadahy, zana-dRamboasalama dia manana fasana ao ilevenan’ ny taranany. Nisy rova sy lapa tsara tarehy tao, hono, misy amontana sy aviavy ka nahaloa-bolana ny ntaolo hoe :
« Mananjara izay monina ao »; ka izay no niavian’ny anarany ankehitriny hoe “ Mananjara ”.
- Imamo andrefana (Manazary, Ambohitrondrana) nomeny an’ Andriampanarifito, zanak’ anabaviny .
Naniraka olona izy ho aty amin’ Andrianampoinimerina hoe:
↑ Rakotoarivelo Thomas (2014), " Andriamasinavalona - Mpanjaka tokana teto Imerina ", Antananarivo
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamasinavalona_(foko)&oldid=1010941"
Voaova farany tamin'ny 19 Aprily 2021 amin'ny 14:54 ity pejy ity.